Okusanda Kubuyekezwa: Ikhabethe lika-Bliss lika-Blaine! - I-Airbnb
Okusanda Kubuyekezwa: Ikhabethe lika-Bliss lika-Blaine!
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Ashlyn
U-Ashlyn Ungumbungazi ovelele
UBlaine's Bliss iyikhabethe elihle elinegumbi elilodwa lokulala likanokusho. Sinikeza okuhlangenwe nakho okuhle kwabashadikazi nemindeni emincane. Nethezeka futhi wehlise umoya kuvulandi yethu engemuva enesitezi esiphindwe kabili esiphelele ngobhavu oshisayo nokuhlala, noma hlola indawo eyi-acre eyi-1.09. Uma ungathanda ukuphuma ehlathini elikhazimulayo, iBlaine's Bliss iyimizuzu embalwa nje yokushayela ezindaweni ezimangalisayo njengeGirls Gone Wine, Grateful Head Pizza kanye neBeavers Bend State Resort Park. Woza ukuze uthole ulwazi, hlalela ama-s'mores amnandi!
Ikhabethe lethu liyikhaya lethu kude nasekhaya! Lesi sikhala se-farmhouse chic sithokomele kodwa sivulekile. Kuzohlala kunezingubo zokulala ezengeziwe esandleni, ikhofi elilungele ukuphiswa, kanye nemidlalo yebhodi. Yonke into esendlini yethu yenzelwe induduzo nokusebenzisa kwakho, akukho lutho oluvinjelwe, ngakho-ke zenze ukhululeke.
4.83 · 145 okushiwo abanye
Ikhabethe lethu litholakala eduze nezinye izakhiwo zekhabethe, nokho, usazozizwa uyimfihlo kanye nenkululeko yokuzulazula. Sisendaweni eseduze kakhulu nezindawo eziningi zokudlela zedolobha kanye nezokungcebeleka.
Sihlala eTexas, kodwa sihlala sitholakala ngohlelo lokusebenza, ucingo noma umbhalo. Omunye wabasingathi bethu basendaweni uzoba khona lapho kunezimo eziphuthumayo.
UAshlyn Ungumbungazi ovelele